घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क ? भाडामा बस्नेले कति दिने सूचीसहित
November 18, 2021 N88LeaveaComment on घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क ? भाडामा बस्नेले कति दिने सूचीसहित
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ । अब लाग्ने शुल्कको तालिका सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई […]
नेपालमा फेरि ‘लकडाउन’ हुनसक्ने काेराेना हैन कारण अर्कै छ !
November 18, 2021 November 18, 2021 N88LeaveaComment on नेपालमा फेरि ‘लकडाउन’ हुनसक्ने काेराेना हैन कारण अर्कै छ !
काठमाडौं । नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै आम नागरिकहरुलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्। बंगालको खाडी र पश्चिम अरेबियन सागरमा उत्पन्‍न भएको एक किसिमको जलवायु प्रणालीका कारण भारतका केही सहरहरुमा भीषण वर्षा हुने र त्यसको असर नेपालमा पनि […]
नेपालमा मोटी सुन्दरी प्रतियाेगिता हुँदै, यस्ता छन् प्रतियाेगिताका नियम
November 18, 2021 November 18, 2021 N88LeaveaComment on नेपालमा मोटी सुन्दरी प्रतियाेगिता हुँदै, यस्ता छन् प्रतियाेगिताका नियम
काठमाडौं । मोटी युवतीहरुलाई लक्षित गरी आयोजना हुँदै आएको सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल’ को चौथो संस्करण ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल २०२२’ हुने भएको छ । आयोजक मोडल सङ्ग्स नेपालले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको जानकारी दिएको छ । प्रतियोगितामा १६ देखि ४० वर्षसम्मका विवाहित तथा अविवाहित […]
आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने पक्का
November 18, 2021 N88LeaveaComment on आउँदो निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने पक्का
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशैभरी एमाले प्रवेशको लहर चलेकोले आउँदो निर्वाचनमा पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेका केही प्रभावशाली नेतासहितलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले बाँके जिल्ला एमालेको किल्ला बन्ने दाबी गर्नुभयो । ओलीले एमाले एक्लै निर्वाचन लड्ने दुस्साहस नगर्न अन्य दललाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ […]
व्यक्तिगत आम्दानीमा कर – कति कमाउँदा कति तिर्नुपर्छ ?
November 18, 2021 N88LeaveaComment on व्यक्तिगत आम्दानीमा कर – कति कमाउँदा कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७८/०८९) को लागि प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको करको दरमा रोजगारीको आयमात्र हुनेको लागि व्यक्तिगत चार लाख र दम्पतीमा साढे चार लाखसम्म करयोग्य आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ । यो भनेको चार हजारदेखि चार […]
मै पनि एमाले देश पनि एमाले…
November 18, 2021 N88LeaveaComment on मै पनि एमाले देश पनि एमाले…
काठमाडौं । कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट एमाले बन्दै हो ?मैले २०५३ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको छु । गाउँ इकाइ समितिको अध्यक्षको रुपमा दुई पटक काम गरे । क्षेत्रीय अध्यक्ष र जिल्ला सदस्यको रुपमा काम गरें ।समयको माग अनुसार मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन भएपछि जनताको माग राप्रपाबाट सम्बोधन हुन […]
स्वचालित मूल्यसूची लागू गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १५२ रुपियाँ पर्ने
November 18, 2021 N88LeaveaComment on स्वचालित मूल्यसूची लागू गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १५२ रुपियाँ पर्ने
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगत छ महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमले भने मूल्यवृद्धि नभई समायोजन भएको जनाएको छ । मुुख्यतया तीनवटा प्रमुख कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको निगमको दाबी छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार नेपालमा […]
देउवाले भाउ नदिएपछि बिच्किएका प्रचण्ड महागठबन्धन बनाउने दाउमा, छापामार शैलीमा हुँदै तयारी
November 18, 2021 N88LeaveaComment on देउवाले भाउ नदिएपछि बिच्किएका प्रचण्ड महागठबन्धन बनाउने दाउमा, छापामार शैलीमा हुँदै तयारी
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगिसकेका थिए । साथमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन लण्डन जाने तयारीमा थिए । शुक्रबार लण्डन उड्नुपर्ने थियो । प्रचण्ड बालुवाटार पुगेको विहीबार अपराह्नको कुरा थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री […]